" ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးဖွဈလာတာဟာ မိခငျကွီးရဲ့သငျပွမှုတှကွေောငျ့မို့အမမြေားနမှေ့ာ မိခငျကွီးဟာသူ့ဘဝအတှကျစံပွဖွဈကွောငျး ဂုဏျပွုစကားဆိုလိုကျတဲ့ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုး'' - Cele Gabar
CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးထိပျတနျးဒီဇိုငျနာတဈဦးဖွဈပွီး အနုပညာရှငျတှအေားကိုးနရေတဲ့ ဒီဇိုငျနာတဈဦးပါ။အနုပညာရှငျတှကေခဈြကွသလို အနုပညာရှငျတှအေပျေါမှာလညျး ဖျောရှတေတျသူပါ။
ဒီနကေ့ရြောကျတဲ့ဇနျနဝါရီလ ၁၆ရကျနကေ့တော့ အမမြေားနဖွေ့ဈပွီး ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးကလညျး မိခငျကွီးကို ” ကနျြတျောကို၇တနျးကြောငျးသားဘဝထဲကစကျခြူပျပညာကိုသငျကွားပေးခဲ့တဲ့ကနျြတျောရဲ့မမေပေါ။ခုထိလညျးကနျြတျောကိုသငျပေးနတေုနျးကနျြတျောလုပျငနျးကိုဦးစီးပေးနတေုနျးပါပဲ။ကနျြတျောရဲ့တဈဦးတညျးသောသငျဆရာမှေးမိခငျပါ။
Designer မြိုးမငျးစိုးရယျလို့ဖွဈလာခဲ့တာအမကွေောငျ့ပါ။အမဟောကနျြတျောဘဝအတှကျတော့စံပွပါလို့…………….(16.1.2022) အမမြေားနအေ့မှတျတရ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့မိခငျကွီးရဲ့ကြေးဇူးတရားတှကေိုသတိတတျစှာအမမြေားနမှေ့ာဖျောပွခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတျတှလေညျး ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးလိုမြိုး အမမြေားနမှေ့ာ မိခငျကွီးကို ကြေးဇူးသိတတျစှာဂုဏျပွုကွဖို့တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
” ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးဖြစ်လာတာဟာ မိခင်ကြီးရဲ့သင်ပြမှုတွေကြောင့်မို့အမေများနေ့မှာ မိခင်ကြီးဟာသူ့ဘဝအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေအားကိုးနေရတဲ့ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးပါ။အနုပညာရှင်တွေကချစ်ကြသလို အနုပညာရှင်တွေအပေါ်မှာလည်း ဖော်ရွေတတ်သူပါ။
ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ဇန်နဝါရီလ ၁၆ရက်နေ့ကတော့ အမေများနေ့ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကလည်း မိခင်ကြီးကို ” ကျန်တော်ကို၇တန်းကျောင်းသားဘဝထဲကစက်ချူပ်ပညာကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကျန်တော်ရဲ့မေမေပါ။ခုထိလည်းကျန်တော်ကိုသင်ပေးနေတုန်းကျန်တော်လုပ်ငန်းကိုဦးစီးပေးနေတုန်းပါပဲ။ကျန်တော်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသင်ဆရာမွေးမိခင်ပါ။
Designer မျိုးမင်းစိုးရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တာအမေကြောင့်ပါ။အမေဟာကျန်တော်ဘဝအတွက်တော့စံပြပါလို့…………….(16.1.2022) အမေများနေ့အမှတ်တရ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုသတိတတ်စွာအမေများနေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးလိုမျိုး အမေများနေ့မှာ မိခင်ကြီးကို ကျေးဇူးသိတတ်စွာဂုဏ်ပြုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Previous post “​မှေးနရေ့ကျမွတျကစပွီးသကျရှညျကနျြးမာ စှာနဲ့အနုပညာအလုပျတှဆေကျလကျလုပျကိုငျနိုငျဖို့ ဦးမိုးဒီအတှကျဆုတောငျးပေးခဲ့တဲ့မိုးစကျ”
Next post ကိုယျဝနျလှယျထားရကွောငျး ပရိသတျကိုအသိပေးလာတဲ့ မငျးသမီးခြောHoney Lee